Tsy sahy milaza ny marina | NewsMada
Asa na mitady ho tapitra, na iniana taperina ny « série » kidnapping momba an’i Toamasina fa hita ho mifanilikilika, manafinafina tsy sahy milaza ny marina ireo tompon’andraikitra samihafa mandray an-tanana ity raharaha ity. Samy manana ny filazany rehetra rehefa mamory ny mpanao gazety, ary ferana ihany ny zavatra tokony holazaina. Nanao ny azy ny mpitsara, ny mpiandry fonja, ny polisy hatramin’ny fianakavian’ny niharam-boina, ary samy nilaza ny “vaovao” ho an’ny mpanao gazety. Samy tsapa tamin’ny fitenin’izy ireo fa somary mifanilika an-kolaka izany izy ireo, ary mihafihafy miteny. Inona loatra ny tena afenina ao ambadik’ity raharaha ity. Samy niaraha-nahita teo ny fihetsiky ny mpitsara, ny avy amin’ny fiadidiana ny Repoblika. Aiza ho aiza ny niafaran’ireny olona marobe ireny? Afenina ny momba azy? Raha ny teo anivon’ny polisy aloha, olona 10 ny hoe natolotra ny fampanoavana. Ary ireo tanana any Ambatolampy efa ho 20 mahery? Ilay mpitsara kosa, tsy misy mihitsy ny vaovao momba azy.
Anisan’ny olana mampanano sarotra ny asa fanaovan-gazety ka mahatonga ireto farany ho voalaza hatrany fa miteniteny foana sy manao vaovao diso ny tsy fanomezam-baovao marina azy ireo. Ny mpanao gazety anefa mikaroka vaovao ny asany, ary mahita arak’izay tokoa izy, kanefa rehefa manao fanamarinam-baovao, mametraka fanontaniana… tsy misy valiny mahafa-po.
Andrasana, araka izany, ny tena marina rehetra momba ity fakana an-keriny ity, fa tsy marina ampahany ihany. Samy mahalala ny rehetra fa misy ny toe-draharaha mbola afenina ao. Ahoana ny momba ireo fitaovam-piadiana mahery vaika tratra? Toa ela loatra ny fanadihadiana momba azy io?
Tsy amin’ny resaka fakana an-keriny ihany no ahitana olana tahaka izany, fa amin’ny vaovao rehetra amin’ny ankapobeny mihodina eto amintsika. Ny fanatsarana ny fanomezam-baovao, sa ny fanatsarana ny asa fanaovan-gazety ny vahaolana amin’izany? Ny goragora amin’ity asa ity indraindray no mahatonga ny sasany hahasahy hisandoka ho mpanao gazety. Aleo samy hilaza ny marina ny rehetra, dia tsy hisy intsony vaovao diso ho an’ny vahoaka, ary tsy hisy ny fanomezan-tsiny, ny fandrahonana, sns.